Family – စာမကျြနှာ4– Healthy Life Journal
ပုံစံတူအမြွှာညီအစ်မက နောက်ထပ်အမြွှာနှစ်စုံစီ မွေးဖွား
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ မိသားစုတစ်ခုဟာ ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအခါသမယတွေနဲ့ ပြည့်စုံနေပါတယ်။ အူတာပြည်နယ်၊ စီဘီအက်စ်ဆော့လိတ်မြို့မှာ ဖြစ်ခေါင့်ဖြစ်ခဲဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ ဒါကတော့ ပုံစံတူ အမြွှာညီအမနှစ်ယောက်က နောက်ထပ်အမြွှာနှစ်စုံစီကို မွေးဖွားခဲ့တာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကယ်ရီဘန်ကာနဲ့ကယ်လီဝေါဆိုတဲ့ အမြွှာနှစ်ယောက်မှာ ၅နှစ်အောက်ကလေး စုစုပေါင်း ၉...
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ မိသားစု ဖန်တီးနိုင်သော အိမ်ရှင်မဖြစ်အောင် . . .
ငွေကြယ်စင်ယံ မိသားစုတစ်ခုမှာ အိမ်သူအိမ်သားတိုင်း တာဝန် ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ အိမ်ထောင်ဦးစီးကလည်း သူ့ တာဝန်ကျေပွန်ဖို့ လိုသလို အိမ်ရှင်မကလည်း ကိုယ့် တာဝန်ကို သိတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ အလားတူ သားသမီးတွေကလည်း သားသမီးတာဝန်ကို ကျေပွန်မယ် ဆိုရင် မိသားစုဘ၀ဟာ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးဖွယ် အပြည့်ရှိနေမှာပါ။ အဲဒီလို...
သားရှင်တို့အတွက် . . .
မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) (၁).အရွယ်အလိုက် ရှင်းပြခြင်း သင့်သားလေးကို အရွယ်အလိုက် လိင် ကျန်းမာရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ ဆေးလိပ်၊ အရက် စတာ တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သိသင့် သိထိုက်တာ တွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြထားဖို့ လိုပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါး၊...
သင့်အိမ်မှာ အချစ်တော် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် တစ်ကောင် ရှိတဲ့အခါ . . .
ဇွန် သင့်အိမ်မှာ အချစ်တော် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေ ဖြစ်တဲ့ကြောင်၊ ခွေး စတာလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အခါ အောက်ပါ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ – အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် ရှိတာကြောင့် ဓာတ်မတည့်မှုနဲ့ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ အန္တရာယ် လျော့ပါးစေပါတယ်။ – စိတ်ဖိစီးမှုကို...
သမီးရှင်တို့အတွက် . . .
မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ငယ်ရွယ်ချိန်မှာ သမီးလေးကို အနေအထိုင် တတ်အောင် သင်ကြားဆုံးမရင်း အနာတရမရှိဘဲ ကြီးပြင်းလာဖို့ ပံ့ပိုးပေးရသလို အရွယ်ရောက်လာချိန်မှာ သမီးမိန်းကလေးကို ပညာဆုံးခန်းတိုင်အောင် သင်ယူနိုင်ဖို့ အားပေးသွန်သင်ရင်း ဘ၀ကြင်ဖော် အရွေးမမှားစေဖို့လည်း ပူပန်ရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သမီးလေး မွေးထားတဲ့...
သမီးရဲ့လက်ဆောင် . . .
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အမျိုးသားတစ်ယောက်က ပါကင်ထုပ်ရာမှာသုံးတဲ့ ရွှေရောင်စက္ကူ ယူဆော့တယ်ဆိုပြီး လေးနှစ် အရွယ်သမီးလေးတစ်ဦးကို ရိုက်နှက်အပြစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ သမီးလေးက ခရစ္စမတ်သစ်ပင်မှာ ချိတ်ဆွဲဖို့ ဘူးငယ်လေးတစ်ခုကို ရွှေရောင်စက္ကူနဲ့ ပတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာပါ။ ခရစ္စမတ်နေ့ မနက်ခင်းမှာ သမီးလေးက...
နောက်ထပ် ငါးမိနစ်လောက် . . .
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ပန်းခြံထဲက ခုံတန်းရှည်တစ်ခုပေါ်မှာ အမျိုးသားတစ်ဦးရဲ့ဘေး၊ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ ထိုင်နေပါတယ်။ “ ဟိုမှာ စကိတ်စီးနေတာ ကျွန်မသားပဲလေ ” အမျိုးသမီးက အနီရောင်ဆွယ်တာလေးဝတ်ပြီး ကစားကွင်းထဲမှာစကိတ်စီးနေတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို လှမ်းညွှန်ပြလိုက်ပါတယ်။ “ ကောင်ချောလေးပဲ ”...
အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ရော်နယ်ရေဂင် ကျင့်သုံးခဲ့သည့် အိမ်ထောင်ရေးခိုင်မြဲစေကြောင်း နည်းလမ်းကောင်းများ
၊ သဒ္ဒါထက် ၊ အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ရော်နယ်ရေဂင်က သူတို့အိမ်ထောင်ရေး ခိုင်မြဲရတဲ့အကြောင်းရင်းကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားဖို့ ရှက်ရွံ့တတ်သူမဟုတ်ပါဘူး။ သူနဲ့ သူ့ဇနီးဟာ ဝေးကွာနေတဲ့အချိန်တွေမှာ စာတွေ အများကြီး အပြန်အလှန်ရေးသားခဲ့ကြပြီး တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ချစ်ခင်မြတ်နိုးကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သလို လက်ဆောင်တွေလည်း ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦး အိမ်ထောင်ရေးခိုင်မြဲပြီး...
သူနာပြုထံမှသင်ယူခဲ့သော အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်နည်းကို သုံး၍ ကလေးငယ်ကို ကယ်တင်ခဲ့သည့် ဖခင်
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ ယူကေနိုင်ငံမှ အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် ဒန်နီယယ်ဝါ့ဒ်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူ ချဲလ်ဆီးစိုဝါဗီတို့ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃လက သမီးလေးတစ်ယောက်ကိုမွေးဖွားခဲ့ပြီး မွေးဖွားချိန်မှာ သမီးလေး လေလာရို့စ်ဟာ ပေါင်ချိန် ၁ ပေါင်နဲ့ ၁၃ အောင်စပဲရှိခဲ့ပါတယ်။ကလေးကို ၂၈ ပတ်နဲ့...
၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊ ကိုတိုးဟာ အသက်ကြီးရင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ ဖခင်နဲ့အတူညစာစားဖို့ စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဖခင်ကအလွန်အိုမင်းပြီး အားနည်းနေတဲ့အတွက် ညစာစားတဲ့အခါ အစာတွေက သူ့ရှပ်အင်္ကျီနဲ့ပုဆိုးပေါ် ပြုတ်ကျနေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်တော့ တခြားညစာစားသူတွေက အဘိုးအိုကို စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဟန်နဲ့ ကြည့်နေခဲ့ပေမယ့် ကိုတိုးကတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။...
ဇူလိုငျ လ၊ 2021 ခုနှဈ